အညာမြေ: Crazyremote apk အခြားတနေ၇ာမ ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်မယ်
Crazyremote apk အခြားတနေ၇ာမ ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်မယ်
ဒါကတော.ဖုန်းထဲကနေကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်တဲ. app နဲ. software ပါ
ဖုန်းထဲမှာ ဒီကနေ ဒေါင်းပီး install လုပ်ပေးလိုက်ပါ for android market for Apple store
ကွန်ပျှူတာမှာဒီကနေဒေါင်းပီးRUN ပေးပါ for pc
Device. ( iPhone, iPad, iPod Touch or Android ) You can see the transmitted PC screen from your computer on Device, and also you can control the keybord and mouse.
OS 2.1 or later
* Multitouch screen....
You can control your PC wherever there is WiFi and 3G connection.....
Windows XP SP3/Vista/Window7 32bit/64bit (not applicable to Mac, Linux)
pro ကိုဒေါင်းချင်တယ်ဆို၇င် ဒီမှာဒေါင်းပါ
Posted by anythar at 06:59
PREMIUM ACCOUNT RE-UPDATED
Jeannie Voice action For Android & iphone
Remote web pro
Windows7SP1 Activated AIO 32Bit 64Bit
Mozilla က ပိတ်လိုက်ရင် Save&Quit , Quit
Norton Internet Security Final (2012)
AVG Database Offline Update 25 DECEMBER 2011
Avira AV Database Offline Update 25 DECEMBER 2011
window 8 Developers Preview
နတိတ်တခိုးအချစ်-ရိန်မိုး မ-ပူစူး မင်းကိုသတိရရင် တွ...
Flash Song နားဆင်၇န်
Crazyremote apk အခြားတနေ၇ာမ ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ...
ဆေးေ၇ာင်စုံအငြိမ်. နှင်. ပြည်တော်ပြန်သီးလေးသီးအ...
iphone OS collection
Ghost Force For Nokia
ှQR code for phone
NOKIA for MYANMAR FONT Symbian Myanmar နောက်ဆ...
NOKIA for MYANMAR FONT and certificate error
iPhone remote control your TV?
91 PC Suite For Android phone